I-Speed ​​Hump, uMkhuseli weCable, i-Pvc Traffic Cone - YONGSHENG
Ibhampa yedokhi ebhampa
I-Tiantai Yongsheng Traffic Facilities Co., Ltd. ngumvelisi wezibonelelo zendlela kunye nezixhobo zokuvavanya ezixhotyiswe ngokufanelekileyo kunye namandla obugcisa anamandla, ngokukodwa kwiMveliso kunye nokuThengiswa kwezinto zerabha kwiCable Protector, uKhuseleko lweWarehouse, ukhuseleko kwindawo yokupaka kunye ne-ramp.
Ngoluhlu olubanzi, umgangatho olungileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye noyilo olunesitayile, iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu nakwamanye amashishini. Iimveliso zethu zibonwa ngokubanzi kwaye zithenjwa ngabasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokutshintsha iimfuno zoqoqosho nezentlalo.
I-6 ye-Rubber Speed ​​Humps ene-Modular Interlocki...
Siphuhliswe ngaphezulu kweemveliso ezingama-200+ ezihambelana ne-MUTCD, ASTM, AS/NZS kunye ne-CE Standard. Siyinkampani ezibophelele ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu kwihlabathi liphela. Injongo yethu kukuba ube ngumthombo wakho ophambili wazo zonke iintlobo zoMkhuseli weCable, uKhuseleko lweWarehouse, ukhuseleko kwindawo yokupaka kunye nethambeka.
Ngaba amagingxigingxi angabonwa nanini na...
Ukubekwa kunye nomsebenzi wokumisa ivili...
Ujongana njani nokunqunyanyiswa "umbulali...